မွေးနေ့မဟုတ်သော မွေးနေ့ ~ မျှဝေမှုတို့ စုစည်းရာ
Happy Birthday ပါ မိုးယံရေ။
အကိုလည်း မွေးနေ့ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို လုံးဝကို မနှစ်သက်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့လည်း ကိုယ်လူလောကထဲကို ရောက်လာတဲ့ နေ့တစ်နေ့ အဖြစ် အမှတ်တရတော့ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာမှ အလှူလုပ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ ရယ်မိတယ်။ ဟိုနေ့ကတောင်မှ သူများနေရာမှာ မွေးနေ့ကို လာမန့်ထားတယ်။ ဘာတဲ့. . . “ မွေးနေ့မှာ အမေကို ကန်တော့ပြီးပြီလား ” တဲ့။ ဒီတော့ ပြောမိတော့မလို့။ တော်ပါသေးရဲ့။ အကိုကတော့ အဖေ ၊ အမေ ကို နေ့တိုင်း ရှိခိုး ကန်တော့ နေကြဆိုတော့ ဒီနေ့မှာမှ အထွေအထူး လုပ်ပြီး ကန်တော့စရာ မလိုတော့ဘူးလို့ ထင်တာပါပဲ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့လေး ဖြစ်ပါစေ။
ယနေ့ မွေးနေ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ သူများကို စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်စေနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပျော်ရွှင်နိုင်သောသူ ဖြစ်ပါစေ။
( ဟို ခက်ဆစ်ဖွင့်တတ်တဲ့ အကို ဆိုတာ ပြောတာလည်း အဟုတ်ပဲနော် :P )
မွေးနေ. မဟုတ်သော မွေးနေ. မှာ သာမက ထာဝရတာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို. စာဖတ်သူ ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင့် ......
မွေးနေ့ မဟုတ်သော မွေးနေ့ လေးမှာ ပျော်၇ွှင်ပါစေ အကိုရေ ...
မနေ့ကလေ လိုင်းမတက်လိုက်ရလို့ မသိလိုက်ဘူး အကိုရ
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မွေးနေ့လေးမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေနော် အကို
ပို့စ်ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး လက်ဆောင်ထုပ် ပြန်ချထားခဲ့ပြီးမှ လာဖတ်ဖြစ်တာ။
ဒီရောက်တော့ မွေးနေ့မဟုတ်တဲ့ မွေးနေ့ နဲ့ ဆုံနေပါရောလား။
နောက်လာမယ်နေ့သစ်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာတွေနဲ့သာ ကြုံပါစေဗျာ။
အနော့ မွေးနေ့မဟုတ်သော အနော့်မွေးနေ့ကို ဆုတောင်းပေးကြသော ညီအစ်ကို မောင်နှမ မိတ်ဆွေများကို ကျေးဇူး အထူးပါခင်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေ